Nuxurka Khudbadihii ay jeediyeen Cumar C/rashiid, Farmaajo, Culusow iyo Jabarti - iftineducation.com
iftineducation.com – Iyadoo maalintii u dambeysay ay tahay khudbadaha ay jeedinayaan Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ayaa waxaa illaa iyo hada hadlay afar Musharax, iyadoo gelinka dambe la dhageysanayo shan musharax oo kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa kulanka ka sheegay in in illaa 215 Xildhibaan ay soo xaadirtay, waxaana la bilaabay dhageysiga Musharaxiinta.
Musharaxii u horeeyay ee khudbada jeediyay ayaa waxaa uu ahaa Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay.
Cumar C/rashiid ayaa ku nuux nuuxsaday is qab qabsiga iyo khilaafka Madaxweyna iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ahaa mid soo jireen ah illaa dowladdii Carte, isla markaana Madaxweyne walba ee xil qabto uu saddex Ra’iisul Wasaare bedelayay.
Waxaa uu sheegay in haddii loo doorto xilka Madaxweynaha Ra’iisul Wasaaraha uu soo magacaabo ay xilka wada dhameysan doonaan, aysan dhici doono is qab qabsi, isagoo xusay inuu og yahay meesha dhibataada ka jirta.
“Waxaa rajeynayaa, hadii aan ku guuleysto xilka Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha aan soo magacaabayo wuxuu helayaa nafis uu ku shaqeeyo, Xukuumadna soo dhisa iyo inbarnaamijkiisa siyaasadeed idin hor-keeno”ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Mr Cumar C/rashiid ayaa soo hadal qaaday go’aankii Maxkamadda Adduunka ee kiiskii Badda, waxaa uu ku eedeeyay dowladda Kenya inay si qaldan sanadkii 2005 ay xuduud calaamadeystay, waxaa uu sheegay in heshiiskii MOU ee Kenya lala galay sanadkii 2009 la siyaasadeeyay, isla markaana aanay waxba ka jirin sida loo sheegayo.
Sidoo kale Maxamuud Maxamuud Culusow oo isna khudbad jeediyay ayaa sheegay in aanay jirin dowlad isaga wata, waxaa uu ka sheekeeyay taariikhdiisa siyaasadeed iyo mid waxbarasho.
Maxamuud Maxamed Culusow ayaa sheegay in dowladda ay ku guuldareystay waajibaadkeeda afartii sano ee la soo dhaafay, isla markaana awoodii dalka ay ku aruursaneyd Madaxtooyada kaliya,
Waxaa uu sheegay inuu door biday in kalsoonida Baarlamaanka uu ku weydiisto xarunta Golaha shacabka, intii uu beel beel iyo maamul goboleed uu uga codsan lahaa.
Khudbadii ugu qosolka badneyd ayaa waxaa jeediyay Musharax Maxamed Axmed Jabarti, isagoo isku sifeeyay inuu yahay nin aamin ah, geessi ah, wadani ah, waxaa uu tilmaamay inuu yahay muwaadin dhab ah, maadaama uu heysto Baasaboor Soomaali ah, halka Musharaxiinta kalena ay heystaan Baasabooro ajnabi ah, dalal kalena ay u dhaarteen.
Waxaa uu sheegay in hadii uu xilka ku guuleysto inuu noqonayo Madaxweynuhii u horeeyay ee raaca diyaarada Somali Airline, isagoo u balan qaaday Xildhibaanada inuu xadka geyn doono, iyaga iyo labadooda waalid, carruurtooda mid walba uu sanad kasta jaamacad ka bixin doono.
Jabarti ayaa sheegay in xilka Wasiirka Maaliyadda, Guddoomiyaha Bankiga Dhexe iyo Khasnajiga uu Haweenka u magacaabi doono, maadaama ay haweenka ka aaminsan yihiin ragga oo aanay wax xadeyn.
Khudbadii la wada sugayay ayaa waxaa jeediyay Musharax Maxamed C/llaahi Farmaajo oo horay u soo noqday Ra’iisul Wasaare, waxaa uu barnaamijkiisa siyaasadeed ugu magac daray Nabad iyo Nolol.
Musharax Farmaajo ayaa sheegay in mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada aanay hadiyad aheyn, balse ay yihiin xuquuq sharci ah, waxaa uu balan qaaday inuud aryeeli doono ciidanka.
Farmaajo ayaa sheegay inuu la dagaalami doono musuq maasuqa, isla markaana cid walba oo hantida qaranka ku takfri fasha xabsi dheer loo diri doono.
Waxaa uu sheegay in ciidamada uu daryeeli doono, mushaarkooda la siinayo, isla markaana carruurta ay ka dhintaan uu kafaali qaadi doono.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in hadii uu xilka ku guuleysto uu bedeli doono dhaqankii siyaasadeed ee ahaa safarka madaxda dowladda ee dibadaha iska aadi jiray, in malaayiin doolar lagu bixiyo mooshin lagu rido dowlado.
Mr Farmaajo ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda oo wada socota ay cid walba ka adkaan karaan, Shabaabna laga adkaan doono sida uu yiri.
Farmaajo ayaa waxaa uu intaa ku daray in la xoojin doono Nabadsugida iyo sirdoonka, isla markaana loo balan qaadayo cidii soo sheegta baabuur qarax in la siiyo lacag dhan $100,000.
Mar uu ka hadlayay arrinta Somaliland iyo dib u heshiisiinta, ayuu sheegay inuu la fariisan doono, wax walba ay tabanayaan uu ka shaafin doono, sidii kale waxaa uu xusay in aanu madaxweyne kaliya noqoneyn ee uu nabadoon noqonayo, cid walbana uu meesha ay joogto ugu tagayo.
Khudbadaha 5 Musharax kale ayaa dhiman, iyadoo khudbadaha la sugayo ay ka mid yihiin Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, Maxamed Cali Ameeriko, Maxamed C/risaaq, Xaaji Maxamed yaasiin Ismaaciil iyo Axmed Maxamed Cabdi
Gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in la soo afjaro khudbadaha Musharaxiinta, iyadoo labo maalin kaddib a dhaceyso doorashada Madaxweynaha oo ku beegan 8-da Bisha Febraayo maalinta Arbacada.